`काम नगरी भत्ता दिने हैन, युवालाई कामसँग जोड्न चाहन्छौं´ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(December 04, 2019)
`काम नगरी भत्ता दिने हैन, युवालाई कामसँग जोड्न चाहन्छौं´
बैंकबाट ऋण लिएर युवालाई खुल्लामञ्चमा लाइन लगाएर हातहातमा पैसा बाँड्ने हैन
साउन २७, २०७६ सोमबार १३:२२:७ | सन्जिता देवकोटा
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारमा धेरै गाउँबस्तीमा एकैपटक विकास निर्माणका काम भए । कतै बाटो खनियो, कतै सरसफाई र रंगरोगन गरियो भने कतै चौतारी र वृद्धाश्रम बनाउने काम पनि भयो ।
गाउँकै युवाहरु काममा खटिए, काम गरेबापत सरकारबाट पैसा पनि बुझे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँबस्तीमा एकखालको चपहलपहल ल्यायो । गाउँमै रोजगारी पाउँदा कति खुशी भए त कतिले यो कार्यक्रममार्फत भएका कामको आलोचना पनि गरे ।
कतिपय पालिकाहरुमा भने यो कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन सकेन । जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै सरकारलाई आरोप लाग्यो । तर सरकारले देशमै पहिलो पटक भएको यो कार्यक्रम सफल भएको बताएको छ ।
अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारे यो वर्ष भएका काम र आएका आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै अब सरकारले यो वर्ष कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ त ? यी विविध विषयमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग कुराकानी गरेका छौं ।
मन्त्रीज्यू, अघिल्लो महिना असारमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यो कार्यक्रमबारे धेरै टिकाटिप्पणी पनि भए । सरकारको मूल्याँकनमा यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो ?
नेपालमा पहिलो पटक बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर यो कार्यक्रम अघि सारियो ।
मूलतः यस कार्यक्रममले वैदेशिक रोजगारीमा जान सामथ्र्य नराख्ने र श्रम बजारसँग कामलाई जोड्न सक्ने युवा जोसँग श्रम छ, तर गरिबी अभावमा बाँच्न परिरहेको छ, त्यस्ता युवालाई जीवनयापन गर्ने अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरियो । देशभर नै उत्साहका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो । समग्रमा यो कार्यक्रम सफल भएको छ ।
त्यसो भए यो कार्यक्रमका लक्षित वर्ग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेकाहरु हैनन् ?
रोजगारी सृजना धेरै त निजी क्षेत्रले गर्छन् । निजी क्षेत्रमै छन् कामका अवसरहरु पनि । सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा कानुन बनाउन सक्छ ।
सकारका विभिन्न कार्यक्रमले रोजगारी सृजनाको अनकूल बाताबरण बनाउन सक्छ । फेरि पनि रोजगारी सृजनाको मुख्य आधार भनेको निजी क्षेत्र नै हुन् ।
तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति यस्तो आउँछ कि रोजगारी सृजनाका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबी र अभावमा एउटा ठूलो वर्ग छ । काम गर्ने सामथ्र्य छ, तर काम छैन र टाढा टाढा गएर उसले काम खोज्न पनि सक्दैन । यस्तो वर्गलाई काम गरेर बाँच्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि सरकारले रोजगारी सृजनामा हस्तक्षेत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
हिजोआज के काम श्रमदानले हुन्छ र ? आम नागरिकलाई श्रमदान गराएर रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ ? ठूला ठूला सडक बनाउन सकिन्छ ? जलविद्युत बनाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने राम्रो हो र यो सरकारका लागि खुशीको कुरा हो । तर यो सधैं सम्भव छैन ।
संसारका अरु देशहरुमा पनि यस्तो प्रकारको हस्तक्षेप भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले पहिलो पटक शुरुवात गर्‍यौं । त्यही भएर यसका चर्चा र बहस पनि बढी भएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
तर हाम्रो मुख्य उदेश्य भनेको गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, श्रमसँग जोड्ने र श्रमको सम्मान गर्ने तथा १२ महिना रोजगारीका अवसर सृजना हुन सकेन भने पनि कम्तिमा सय दिनको रोजगारी सृजना गर्ने गरी यो कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ गरिएको हो ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि अहिले त औषतमा १३ दिनको मात्र रोजगारी प्रदान गरियो । ३० दिने रोजगारी प्रदान गर्ने भनेर छुट्टै कार्यविधि पनि बनाइएको थियो । तर किन ३० दिन रोजगारी दिन सकिएन त ?
हाम्रो उदेश्य त सय दिन नै रोजगारी दिने भन्ने हो । तर पहिलो वर्ष सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ भनिएको छ ।
यसको कारण के हो भने पहिलो वर्ष संविधानको व्यवस्थाअनुसार रोजगार ऐन बनाउने, नियमावली निर्देशिका बनाउने र रोजगार कार्यविधि, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यविधि, रोजगार संयोजकको छनोट, रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, आईटी प्रणालीको निर्माण, स्थानीय तहसँगको सम्झौता, प्रशिक्षण लगायतका धेरै कामले गर्दा समय धेरै लाग्यो ।
अन्तिम समयमा थोरै मात्रामा भए पनि राहत पुग्न सकोस् भनेर हामीले कार्यक्रम शुरुवात गरेको हौं । एक लाख ८७ हजार जनाले रोजगारी पाउनुभयो । ६४४ वटा स्थानमा सरदर १३ दिनको हिसावले ७ हजार ७५० वटा आयोजनामा काम पाउनुभयो ।
हाम्रो उदेश्य त भरपर्दो र नियमित काम दिने नै हो । ३० दिन कम्तिमा रोजगारी दिने भन्ने थियो । तर तोकिएको रकमले भ्याउनेभन्दा बढी बेरोजगार व्यक्तिहरु काममा आउनुभयो । आवश्यकता र सरकारले तोकेकोभन्दा बढी व्यक्ति काममा आएकाले पनि ३० दिनको रोजगारी दिन सकिएन ।
अब यो कार्यक्रमबारे आएका विवादका कुरा गरौं न । श्रमिकले मकै गोड्दा हेलमेट लगाए, झार उखेलेर टारे, जनश्रमदानले हुने काममा पनि करोडौंको रकम खर्च गरियो भन्ने लगायतका आलोचना भइरहेको छ नि ?
हिजोआज के काम श्रमदानले हुन्छ र ? आम नागरिकलाई श्रमदान गराएर रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ ? ठूला ठूला सडक बनाउन सकिन्छ ? जलविद्युत बनाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने राम्रो हो र यो सरकारका लागि खुशीको कुरा हो । तर यो सधैं सम्भव छैन । श्रमदान एक दिन गर्न सकिन्छ, दुई दिन गर्न सकिन्छ ।
कामप्रति जागरण ल्याउने गरी सरकारका तर्फबाट आह्वान गर्दैछौं । त्यो गर्न सकिएला ।
हाम्रो जस्तो देशले वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी निर्वाह भत्ता दिनुभन्दा काम गरेर, काम गरेको पारिश्रमिक दिएर कामप्रति सम्मान जनाउनु र काम गरेर बाँच्न सिकाउनु सकारात्मक कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्दा पनि सुरुका दिनमा श्रमदान गरिएको छ । त्यो फरक कुरा हो । तर जहाँसम्म बाटो बनाउने, सिँढी बनाउने, विद्यालयका भवन, सार्वजनिक शौचालय, लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ, श्रमिकहरुले ज्याला पाउनुभएको छ । ज्याला दिएका छौँ।
रोजगार ऐनअनुसार या त हामीले रोजगारी दिनुपर्छ या त निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । नेपाल जस्तो गरीब देश, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने हो भने कम्तिमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता दिनुपर्छ ।
म यहाँ एउटा तथ्य पेश गर्न चाहन्छु । परिवारका कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा नगएको, देशभित्र एउटा पनि रोजगारी नपाएको, निश्चित आयभन्दा कम आय भएको परिवारको सँख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । कि त उनीहरुलाई सरकारले निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ, कि रोजगारी ।
यो ६ लाखभन्दा बढी परिवारलाई बेरोजगार भत्ता दिनुभन्दा श्रम बजारमा ल्याउनका लागि चाहिँ अघि तपाईँले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजनामा हस्तक्षेप गरेको हो ? यो नेपालमा मात्र हो कि अरु देशहरुमा पनि यस्ता उदाहरण छन् ?
नेपालमा मात्र हैन, अरु देशहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रम छन् । तर केही देशले त बेराजगार युवालाई कामै नगरी पनि भत्ता दिने गर्छन् । नर्वे, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, जापान लगायतका देश र केही हदसम्म भारतमा पनि यो प्रकारको कामै नगरी बेरोजगार भत्ता दिने गरेका छन् ।
हामी काम नगरी भत्ता दिने हैन, युवालाई कामसँग जोड्न चाहन्छौं । काम गरेर पारिश्रमिक लिने र आफ्नो पौरखले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउन चाहन्छौं
हामी बेरोजगार भत्तालाई प्रोत्साहन गर्न चाहँदैनौं । बेरोजगार भत्तालाई प्रोत्साहन गर्‍यो भने काम नगरी बाँच्न चाहने प्रवृत्ति हुर्कन्छ । एकातिर उत्पादन घटिरहेको छ।
कृषिजन्य उत्पादन पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काेतिर काम नगरी पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने भयो भने पछि भयावह अवस्था पनि आउन सक्छ ।
यसकारण हामी काम नगरी भत्ता दिने हैन, युवालाई कामसँग जोड्न चाहन्छौं । काम गरेर पारिश्रमिक लिने र आफ्नो पौरखले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउन चाहन्छौं ।
यसकाराण पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँ छाडेर टाढा टाढासम्म जान नसक्ने बेरेजगार युवालाईसमेत पालिकाहरुमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र कामसँग जोड्ने, पारिश्रमिक दिने, र काम गरेरै आफ्नो जीवन बिताउने गरी यो बातावरण सृजना गर्न चाहन्छौं । यही हिसाबले आम नेपाली युवालाई सन्देश दिन चाहिरहेका छौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो । सबै पालिकाहरुमा रोजगारी सृजनाका लागि सशर्त अनुदान रकम पनि पठाइयो । तर १०९ वटा पालिकामा त यो कार्यक्रम सञ्चालन भएन । किन यस्तो भयो ?
सबै पालिकाको क्षमता, काम गर्ने सोच समान खालको हुँदैन । त्यही भएर कतिपय पालिकाले यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेनन् । हाम्रो चाहना त सबैले गरुन् भन्ने नै हो । सबै त्यही हिसाबले गम्भीर हुन सकेनन् ।
ती पालिकाहरुका बेरोजगार युवा त कामबाट बञ्चित भए नि त ?
हो, बञ्चित भए । हामीले कार्यक्रम पठाउँदा पनि कार्यक्रम गर्न नसक्ने पालिकामाथि त्यहीँका युवाले नै प्रश्न उठाउनेछन् । त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं नै विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ ।
एकातिर युवाहरु बेरोजगार छन्, अर्कातिर रोजगारीको कार्यक्रम पठाइएको छ, बजेट पठाइएको छ, मापदण्ड पठाइएको छ, सिकाइएको छ, सम्झौता गरिएको छ, तर काम दिन सकेनन् भने उनीहरुलाई त्यहाँका युवाले प्रश्न उठाउनेछन् ।
त्यसकारण हरेक पालिकाहरु नागरिकप्रति, नागरिकका समस्याप्रति कत्तिको गम्भीर छन्, जिम्मेवार छन्, यो आधारमा हरेकको मूल्याङ्कन हुन्छ । यसकारण सबै पालिकाले प्रभावकारी रुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु नै आम नागरिकको हितमा हुन्छ ।
सबै पालिकाले नगरे पनि, अनि विभिन्न प्रतिक्रिया र आलोचना भए पनि यो एक महिने रोजगार कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्ने हो ?
हरेक नयाँ काम अलोचनारहित हुन सक्दैन । प्रतिक्रिया आइरहन्छन् । जब तपाईं यथास्थितिलाई तोड्न चाहनुहुन्छ, नयाँ कार्यक्रमको कल्पना गर्नुहुन्छ, तब कहीँ न कहीँ तरङ्ग आउने गर्छ ।
२०५१ सालमा ९ महिने सरकारको पालामा वृद्धभत्ता वितरणको काम शुरु भयो । त्यतिबेला देशको बजेटमा कनिका छरियो, देशको बजेटलाई बर्बाद गरियो, देशको विकास अवरुद्ध हुन्छ भनेर संसदमा कुरा उठाइयो । बाहिर कुरा ल्याइयो ।
काम गरेर बाँच्न पाउने कुरामाथि प्रश्न उठाउने, काम गर्दा प्रयोग गर्ने पोशाकमाथि प्रश्न उठाउने, पोशाक र औजारमाथि खिल्ली उडाउने, श्रमिकहरुले गरेको कामप्रति खिल्ली उडाउने काम भैरहेको छ ।
लगातार वृद्धभत्तालाई, सामाजिक सुरक्षाको कामलाई असफल पार्ने गरी राजनीतिक र सामाजिक प्रहार भयो । हरेक क्षेत्रबाट असहयोग भयो । तर आज जसले वृद्धभत्ताको विरोध गर्छ, त्यस्ता पार्टीहरु नांगिन्छन् । हिजो विरोधमा बोल्नेहरु पनि आज १० हात माथि उफ्रिएर यसको समर्थनमा बोल्ने गरेका छन् ।
यसकारण आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको छ, केहीले अत्तालिएर यसको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले लाखौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्‍यो भने भविष्यमा यसकोे राजनीतिक प्रभाव सरकारको पक्षमा पर्छ कि भनेर पनि केहीले डिजाइनका साथ विरोध गरिरहेका छन् । तर यी तमाम कुराका बीचमा पनि सरकारको दायित्व भनेको त गरीब नागरिकलाई बाँच्ने आधार दिने हो, न्याय दिने हो ।
बेरोजगार व्यक्तिको पनि देश हो । उनीहरुले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ । पहिला बहुदल आएपछि तपाईंले विचार गर्नुहोस्, धेरै कार्यक्रम पाँचतारे होटलहरुमा हुन्थे ।
होटलहरुमा गरीबका नाममा सेमिनार, गोष्ठी गरेर दस्तावेज बन्ने गर्दथे । अहिले त कम्तीमा गरीब नागरिको बस्तीमा काम पुग्यो । उनीहरुले आफ्नो गाउँमा काम गर्न पाए ।
कतै श्रम बुझिएको छैन कि, कतै श्रमिकको भूमिका बुझिएको छैन कि जस्तो लाग्छ । म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैले पनि श्रमिकको कामलाई अमर्यादित ढङ्गले खिल्ली उडाउने गरी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
श्रमिकले सुरक्षा हुने गरी काम गर्न पाउनु पर्छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले काम गर्दा श्रमिककाले कस्तो पोशाक लगाउने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ, । नेपालको श्रम ऐनले पनि श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार काम भएको हो ।
तपाईँले यस्तो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट उपकरण खरिदमै धेरै खर्च गरियो, मकै गोड्दा किन हेलमेट लगाउन पर्‍यो ? अनावश्यक ठाउँमा सरकारले पैसा खर्च गर्‍यो भनेर आलोचना त व्यापक भयो नि त ?
यसै भनेर हुँदैन । यो कसरी भयो भन्ने पुष्टी हुनु पर्छ । यद्यपि यो खर्च मन्त्रालयले गर्ने होइन । मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । कार्यविधि पठाएको छ ।
काम गर्न चाहिने सामग्री किन्न सक्ने, निश्चित प्रतिशत उपकरण खरिदमा र कति श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा तोकिएकै छ । हाम्रो काम त कार्यविधि बनायौं ।
तरिका र मापदण्ड पठायौं । खर्च त पालिकाले, उपभोक्ता समितिहरुले आफ्नो ढङ्गले गरे । फेरि पनि जुन ढङ्गले काम भएको छ, यो कानुन विरुद्ध भएको छैन ।
त्यसो भए पालिकाहरुले कार्यविधिअनुसार नै काम गरेका छन् ?
कतै काम गरेका छैनन् भने हामी त्यसको छानबिन गरौंला । अनुगमन गरौंला । तर आठ हजारभन्दा बढी आयोजनामा लाखौं श्रमिकले काम गर्दा एक दुई ठाउँमा त्रुटि हुन सक्छन् ।
एक दुई ठाउँको त्रुटिले समग्र योगदानलाई ओझेल पार्न र मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ र ? यसकारण यसलाई सम्पूर्णतामा हेर्न जरुरी छ । समग्रमा आयोजनाहरु कसरी सम्पन्न भए, त्यसलाई त्यही हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न, विश्लेषण गर्न र निश्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।
नेपालमा सरकारका तर्फबाट रोजगारी सृजनाका लागि अघि सारिएको यो कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिक्रिया आए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अरु देशमा यस्ता कार्यक्रम सफल छन् ?
शुरु शुरुमा सबै देशमा चर्चा हुने, पक्ष विपक्षमा तर्क बितर्क हुने गरेको हामी सबै देशको इतिहासमा पाउँछौं । रोजगारी सृजनाको चर्चा झण्डै तीन सय वर्षअघि १७ औं शताब्दीदेखि शुरुवात भएको देखिन्छ । नागरिकका लागि रोजगारी सृजना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भन्ने चर्चा चलेका धेरै उदाहरण पनि छन् ।
जस्तो सामान्यतया अरु देशमा ८०÷९० वर्षअघि नै अहिले हामीले नेपालमा गरेको कामको शुरुवात भएको पाइन्छ । जस्तै अमेरिकामा १९६५ मा, बेलायतमा १९११ मा, न्यूजिल्याण्डमा १९६४ देखि यस्ता कार्यक्रम सुरु भएको देखिन्छ ।
जर्मनीमा १९२७ देखि, क्यानडामा १९४० देखि, स्पेनमा १९६१ देखि लगायत अरु थुप्रै देशमा विभिन्न नाममा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । र धेरै ठाउँमा सफल भएका पनि छन् ।
पहिलो वर्ष नै सबै हिसाबले सफल हुन्छ भन्न सकिंदैन । दुई, चार वर्ष या आठ, दश वर्ष नै लागेका पनि उदाहरणहरु पनि छन् । तर आरम्भमा सबै देशले अत्यन्त अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परेको, पक्ष विपक्षमा बहस भएको पाइन्छ ।
जस्तै जापानमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा युद्ध सजिलो हुन्छ भनेर टिप्पणी गरेको कुरा पनि मैले पढिरहेको छु । संसारमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम भनेको रोजगारी सृजना हो । तर सरकारले यो खालको अप्ठ्यारो काम पनि पूरा गर्ने गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । विगतमा यो प्रतिवद्धता कुनै सरकारबाट आएन ।
आउँदा दिनमा यो कार्यक्रमलाई अझ परिणाममुखी, फलदायी र सकारात्मक तथा नयाँ ढङ्गले नागरिकले गुनासो गर्नै नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौं । आवश्यक पर्‍यो भने कार्यविधि पनि परिमार्जन गर्नेछौं ।
आउँदो वर्ष कम्तीमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने यो सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । हाम्रो कामको मूल्याङ्कन, र कसी हामीले काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यसमा भर पर्छ । यसकारण यो प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ । यो स्वयंमै ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
मानवीय हिसावले र कामको हिसावले महत्वपूर्ण छ । हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ । हामी चुनौतीसँग सामना गर्ने आँटका साथ आम गरीब नेपाली युवा, नागरिक जसले बाँच्न साहरा पाइरहेका छैनन्, उनीहरुलाई नयाँ आधार दिन चाहन्छौं । नयाँ सन्देश दिन चाहन्छाै । नेपालको पौरखले नेपालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं ।
अहिले आएका प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुहुन्छ ? अब यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
रोजगारी सृजना भन्नासाथ नेपाल सरकारले मात्र रोजगारी सृजना गरोस् भन्ने भनाइ पनि कतैकतै देखिन्छ । खासगरी केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरु तीन तहको समन्वयमार्फत सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटमा रोजगारी सृजना हुने पाटो एउटा छ ।
त्यसको साथै निजी क्षेत्रमार्फत, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्रमार्फत सृजना हुने रोजगारी र हामीले कामको बजारसँग जोड्न सक्ने गरी युवालाई सीपयुक्त बनाउने, दक्ष बनाउने गरी निजी, सरकारी, सहकारी लगायत सबै क्षेत्रमार्फत रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौं ।
यसको मुख्य उदेश्य एकातिर युवालाई सीपयुक्त बनाउने र अर्कोतर्फ बेरोजगारलाई श्रम बजारसँग जोड्ने नै हो । र अर्को रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, नियमित, दिगो, भरपर्दो रोजगारी सृजना गर्ने र शिक्षित र अशिक्षित सबै युवाका लागि रोजगारी सृजना गर्ने गरी सरकारले नीति निमार्ण गर्नेछ ।
सरकारले केही महत्वपूर्ण फैसलाहरु लिनेछ । अर्कोतर्फ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीलाई न्यूनतम रोजगारी दिनेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । हामीले विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई लिएका छौं ।
अरु देशका अभ्यासहरु पनि हेरिरहेका छौं । देशभित्र रहेका सम्भावनाहरुलाई मनन गर्दै आउँदा दिनमा यो कार्यक्रमलाई अझ परिणाममुखी, फलदायी र सकारात्मक तथा नयाँ ढङ्गले नागरिकले गुनासो गर्नै नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौं । आवश्यक पर्‍यो भने कार्यविधि पनि परिमार्जन गर्नेछौं ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋण लिने कुरा पनि आइरहेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो आवश्यक छ ?
आवश्यक छ । रोजगारी सृजना र सीपका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता लिन सक्दछ भन्ने कुरा वैदेशिक सहायता नीतिले पास गरेको छ । नेपालका युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी हामी ऋण लिँदैछौं ।
बैंकबाट ऋण लिएर युवालाई खुल्लामञ्चमा लाइन लगाएर हातहातमा पैसा बाँड्ने हैन । काम सृजना गरेर पारिश्रमिक दिने गरी, पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी पैसा त्यसमा प्रयोग गर्ने र श्रमदान गरेबापत युवाले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र युवालाई सीपयुक्त बनाउने उदेश्यका साथ सहायता लिन खोजिएको छ ।
नेपाली युवालाई खान नपाएर भोकभोकै बाँच्ने अवस्था हुनुभन्दा काम गरेर बाँच्ने अवस्थाको सृजना गर्नु आम नागरिक र सरकारका लागि राम्रो कुरा हो ।
अहिले गाउँगाउँमा रोजगारीका अवसरको चर्चा भइरहँदा विदेशमा काम गर्ने युवालाई गाउँमै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला । विदेशमा रहेका युवालाई फर्काउने अवस्था यो कार्यक्रमले सृजना गर्न सक्छ कि सक्दैन त ?
विदेशमा काम गर्ने साथीहरु, जसले जोखिमपूर्ण काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । म विभिन्न देशमा रहनुभएका सबै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपालभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृृजना गर्न सकौं, खोजी गर्न सकौं, आधार तय गर्न सकौं भनेर नै हामीले त्यही हिसाबले काम गरिरहेका छौं । पहिले यो मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगारी जस्तो मात्र भएको थियो ।
तर अहिले देशभित्र रोजगारी सृजना, नागरिकका सामाजिक सुरक्षाको कुरा यो मन्त्रालयको मुख्य काम हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।
फेरि पनि विदेशमा रहेका साथीहरु नेपाल फर्किनुभयो भने उहाँहरुले विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी र उहाँहरुलाई काम गर्ने आधार तय गर्नका लागि तत्परता देखाइरहेका छौं ।
उहाँहरु नेपालमा आएर योगदान गर्न चाहनुभयो भने सरकारका तर्फबाट हामी जहिले पनि स्वागत गर्न तयार छौं ।
(मन्त्री विष्टसँगको कुराकानी मंगलबार बिहान प्रसारण हुने कार्यक्रम `देश परदेश´मा पनि सुन्न सकिन्छ।)
प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि पहिलो पटक नेकपाको सचिवालय बैठक
उसुमा नेपालका दीपकले जिते स्वर्ण
१३ ‌‍औँ साग : कराँतेकी अनुपमाले जितिन् स्वर्ण
साग महिला क्रिकेट : नेपाल बंगलादेशसँग १० विकेटले पराजित
जिउँदै छाउगोठ, मर्दै महिला
जाडोमा छाला कसरी जोगाउने ?
इस्मा गाउँपालिकामा आज शोक बिदा
बुधबार अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
शिकार र पोथीको खोजीमा १३०० किलोमिटरको यात्रा
५ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ जनाको सरुवा
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको जित
रवीन्द्रको उत्तराधिकारीका रुपमा अघि बढ्दै विद्या
दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आज २१ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा
निर्माण सम्पन्न भएको १३ महिनापछि मौसमी राडारको उद्घाटन
नेपालले एकै दिन जित्याे १२औँ सागमा भन्दा धेरै स्वर्ण
महिला क्रिकेटमा अञ्जली चन्दको विश्व कीर्तिमान